Wararka - T-shaati-yada ayaa hada ah cunsurro caan ah
T-shaati-yada ayaa hada ah cunsurro caan ah. Waxay yihiin wax iska caadi ah, fudud oo raqiis ah. Waxaa raadsada dadweynaha. Marka imisa nooc oo funaanado ah ayaa suuqa yaal, oo marka asxaabtu is urursadaan oo wax cunaan, wasakhda ayaa ka daadanaysa dharka. Sidee loo nadiifiyaa?
1. T-shaarka rog roga intaadan maydhin ka hor, si astaamaha quruxda badan aysan waxyeello u soo gaadhin intaad dhaqaysid.
2. Gacanta ku dhaq, tartiib ah, xoog ha isticmaalin,
3. Si toos ah ha u qalajin funaanada, u rog dhankaaga si aad u qalajiso. Tani waxay ka ilaalin kartaa dharka inay wax yeelaan, dharkuna wuxuu isu beddelayaa huruud iyo adkaansho
4. Shaati midabkiisu mugdi yahay waxaa lagu qooyn karaa biyo milix leh 1 ~ 2 saacadood markii la dhaqo markii ugu horreysay, taasoo ka ilaalin karta dharka inay midab yeeshaan.
5. Deji qaabka funaanadda markii aad qallaleyso, sidaa darteed uma baahnid inaad gubto.
6. Ha ku dhaqin funaanado dhar kale oo mugdi ah, si aadan dharka ugu dhicin, midab isu gudub,
7. Ha kululaanin heerkulka, oo heerkulka biyaha ee funaanada cudbiga ah waa inuusan ka badnaan 30 darajo, si uusan u dardar gelin gabowga ugana dhicin daabacaadda. Tilmaamaha lagu dhaqo shaatiyada isboortiga xilliga firaaqada 1. alkali wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka.
Sidee loo dhaqaa funaanadaha fidsan?
T-shaati-yada laastikada ah waa inaan lagu feerin heerkulka sare si looga hortago in waxyeello u gaarto dabacsanaanta dharka; ha liicin, taas oo dhaawici doonta dabacsanaanta dharka; Qaar ka mid ah funaanadaha laastikada ah ayaa lagu tolay dunta xudunta u ah, dunta ayaa sifiican u jilicsan, dusha sare ee marada ayaa ka sii badan. Ka taxaddar inaadan ka badin markaad dhaqayso Waa culus tahay inaad ka hortagto qulqulka xad dhaafka ah; funaanado laastiig ah looma bandhigi karo qorraxda si looga hortago in waxyeello u gaarto dabacsanaanta dharka.
Guud ahaan marka la hadlayo, markaad maydhaysid funaanadaha, iskuday inaadan mashiin ku maydhin, maxaa yeelay taasi waxay saamayn doontaa daabacaadda iyo dabacsanaanta dharka. Intaa waxaa dheer, waxaa ugufiican in lagu qalajiyo dhinaca gadaal si looga hortago qaababka daabacan in ay midabkooda u badalaan.